Manakana ny fandrosoana any Nepal ny kolikoly · Global Voices teny Malagasy
Manakana ny fandrosoana any Nepal ny kolikoly
Voadika ny 02 Oktobra 2018 21:21 GMT
Vakio amin'ny teny Français, 繁體中文, 简体中文, Español, Português, বাংলা, English
Tsy miafina intsony fa olana lehibe any Nepal ny kolikoly . Araka ny filazan'ny Transparency International (TI), laharana faha-143 (raha laharana faha-121 teo aloha) amin'ny firenena 180 amin'ny ambaratongan'ny ady amin'ny kolikoly ny firenena. Nouvelle Zélande no tsy dia mpanao kolikoly indrindra ary Somalia no tena mpanao kolikoly indrindra.
Milaza ny TI fa ny anton'ny faharatsian'ny kolikoly toa tsy voafehin'ny firenena dia noho ny:
“tsy fitoniana ara-politika sy ny governemanta marefo any Nepal sy ny fiakaran'ny tahan'ny kolikoly. Na dia somary milamina aza tao Nepal tamin'ity taona ity, mbola nitombo ny kolikoly satria miha-marefo ny sampana misahana ny fampiharan-dalàna noho ireo olana isan-karazany mifandraika amin'ny tetezamita”
Mohan Nepali ao amin'ny Groundreport nilaza hoe:
Mbola lavitra i Nepal amin'ny ady amin'ny kolikoly manjakazaka, ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fahombiazan'ny rafi-panjakany.
Ny fiakaran'ny vidin-tsolika amin'izao fotoana izao dia heverina ho toy ny famantarana ny hery goavan'ny tanjaky ny tsena maizina, miasa miaraka amin'ireo mpiantsehatra ara-politika ao amin'ny rafitry ny fahefam-panjakana.
Dr. Hari Bansha Dulal, mpaneho hevitra ara-politika malaza mampahatsiahy fa manana ireo mpampiroborobo azy tsara toerana ny kolontsain'ny kolikoly.
“Tsy ireo mpanao politika mampalahelo ao an-toerana ihany no miezaka miditra amin'ny politika izay mandray anjara amin'ny fandrobana ny fanjakana, tsy niala tamin'ny zony handroba ny fanjakana manontolo ireo lazaina fa mpitarika ambony ao amin'ireo antoko politika lehibe. Mikasa ny tsy handoa ireo trosa 10 tapitrisa Rs nataon'ny praiminisitra teo aloha sy minisitra nandritra ny roapolo taona lasa ny governemanta Madhav Kumar ao Nepal. Ankoatra an'i Krishna Prasad Bhattarai, ao anaty lisitra avokoa ireo praiminisitra teo aloha rehetra tao anatin'ny roapolo taona farany. Tsy misy fotoana tsara noho izao mihitsy satria ny praiminisitra Nepal tenany no tao anatin'ny lisitry ny malala-tanana izay nasongadiny nandritra ny fe-potoana maha-praiminisitra lefitra azy tao amin'ny firenena taona maro lasa izay.
Raha mikasika ny fandrobana fanjakana, dia tsy miala amin'ireo mpanao politika Nepaley ny marimaritra iraisana. Ary, tena mahatalanjona tokoa izy ireo amin'izany. Tsy zava-miavaka ao an-toerana ho an'i Dang ny firaisan'ny antoko rehetra ao anatin'ny sompitry ny fanjakana. Vao haingana no nitrangan'izany isaky ny zoron'ny firenena.”
Tsy voafetra amin'ny governemanta sy ny mpanao politika ihany ny kolontsain'ny kolikoly any Nepal. Mampalahelo fa lasa niharan'ity aretina ity koa ny fiainana ara-tsosialy. Krishna Bhusal manoratra ao amin'ny bilaoginy mikasika ny fanambadiana mangataka “daoty” goavambe ataon'ny fianakavian'ny mpampakatra, sy ny ampakarina tsy te-hiraharaha ny tsy fahatanterahan'ny toetran'ny mpampakatra raha toa ka manana toerana tsara ao anatin'ny governemanta izy (izay ahafahany mahazo tombontsoa ara-politika sy ara-toekarena tsy ara-dalàna) ary manimba ny fahamasinan'ny fifandraisana ara-tsosialy.
Taona vitsy lasa izay, noho ny hamaroan'isan'ny mpiasa Nepaley mankany ivelany mba hitady asa, nanjary fitrandrahana volamena virtoaly ho an'ireo manampahefana mitady tombontsoa tsy ara-drariny ny fifindra-monina sy ny fiarovana sisintany. Ao amin'ny bilaogin'ireo manamboninahitra Nepaley, B. Basnet izay nafindra tany amin'ny sampan-draharaha hafa vao haingana, manadihady ny antony mahatonga ny mpiasa misahana ny fifindramonina ho voasariky ny kolikoly.
“Amin'ny fifindra-monina, ireo mpivezivezy tsy ara-dalàna no loharanon'ny fidiram-bola lehibe tsy ara-dalàna. Raha ny marina, dia tsy ao anatin'ny lisitry ny fidiram-bola kendrena ireo mpivezivezy ara-dalàna. Mahavariana ny karazana sy ny habetsahan'ireo mpivezivezy tsy ara-dalàna. Atao amin'ny fankatoavana mialoha sy fiaraha-miasa amin'ny manampahefana ambony amin'ny minisitera sy ny sampan-draharaha ny ankamaroan'ny asa tsy ara-dalàna. Zaraina avy hatrany amin'ny alalan'ireo mpiasany ny isan-jaton'ny fidiram-bola toy izany. Koa, hadalana ny manome tsiny fotsiny ireo mpiasan'ny fifindramonina amin'ny raharaha kolikoly”
Milaza i Basnet fa ny fanavaozana ny fifindra-monina dia tokony hanomboka eny amin'ny mpiasam-panjakana ambony.
Mba handrefesana ny haben'ny kolontsaina kolikoly ao Nepal, ity misy lahatsary YouTube avy amin'ny Avenues TV ao Kathmandu. Azonao jerena ny hosoka mandritra ny fizotry ny fividianana fitaovana ao amin'ny distrikan'i Salyan izay ao anatin'ny tetikasa fizaran-drano ho an'ny fiarahamonina.
“Misy fiantraikany amintsika rehetra ny kolikoly,” hoy ny Sekretera Jeneralin'ny Firenena Mikambana Ban Ki-moon nanaiky tamin'ny hafany momba ny Andro iraisam-pirenena Iadiana amin'ny kolikoly amin'izao fotoana izao.
Miorim-paka ny kolikoly any Nepal. Voakasik'ity faharatsiana ity avokoa ny kolontsaina, ny fifandraisana ara-tsosialy, ny fandraharahana ary ny governemanta. Raha tsy miara-miasa ny vahoaka sy ny governemanta mba hampitsaharana ny fanekena ara-tsosialy amin'ity kolikoly ity, dia tsy azo inoana fa hiverina any Nepal ny fahamarinana.